Guddiga Madaxabannan ee Doorashooyinka Qaranka oo Su’aalo laga weydiiyay warbixintii ay u gudbiyeen Golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya – GMDQ
Waxaa la geliyey Warsaxaafadeedka
Guddiga Madaxabannan ee Doorashooyinka Qaranka oo Su’aalo laga weydiiyay warbixintii ay u gudbiyeen Golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya
Golaha shacabka oo ay soo xaadireen kooram dhan 140 Mudane, uuna shir gudoominayey Gudoomiye ku Xigeenka koowaad Golaha Shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey, ayaa su’aalo lagu weydiiynayay Guddiga Madaxabannan ee Doorashooyinka Qaranka.
Ugu horreyn waxaa hadal jeedin kooban oo ay u jeedisay xildhibaanada Golaha Guddoomiyaha Guddiga Mrw, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim si guudna u dulmartay nuxurka warbixintii ay usoo gudbiyeen Golaha oo ka koobnayd warbixintii afarbiloodlaha ahayd, Qorshaha istiraatiijiyadda ee 5ta sano iyo jawaabaha su’aalihii ee uu Golaha Shacabka soo weydiiyay Guddiga ee saabsanaa u diyaargarowga Doorashada 2020ka.
Gudoomiye Xaliimo, Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya u sheegtey inay diyaar u yihiin ka Guddi ahaan ka Jawaabida su’aalahooda.
Xildhibaanadda ayaa u guda galay su’aalo kala duwan oo ay weydiiyeen Guddiga
Su’aalahuna wuxuu u dhacay habkan
“maadaama aad wax badan ka soo barateen arrimaha Doorashooyinka, dalkana la rabo inuu ka dhacdo Doorasho, ammniga dalkana uusan wada hagaagsaneyn ,Haddii ay idinku adkaato gaariska gobolada qaar, maxaa qorshe ah ee aad noo sheegi kartaan? Ma miisaaniyad gaar ah ayaad u heysaan arrimaha doorashooyinka mise mida hada aad heysataan ee aan wada ognahay inuusan waxba ku qabsoomi Karin un baad rabtaan inaad ku shaqeysaan?
Gudoomiye ku xigeenka Guddiga Doorashooyinka Sayid Cali Sheekh Maxamed, oo ka jawaabaya suaalaha kor ku xusan ayaa yiri ”
“waa ku mahadsan tahay Xildhibaane Su’aalahaaga Qiima leh, mida Amniga waxaan kuu sheegi lahaa, Amni waxaa waajib ka saaran yahay inay sugaan wasaaradaha Amniga u qaabilsan, Guddiga howlahiisa waa sii wadanayaa, Mida Miisaaniyada waxaan u soo Gudbiney Golaha Shacabka oo aan ka rabney inay garab nagu siiyaan helida miisaaniyad uu ku shaqeyn karo Guddiga, ujeedada aan idiinkugu soo gudbinay caqabadaha naga heysta Miisaaniyad yarida ayaa ahaa mida aan idinka dooneynay inaad nagu garabsiisaan, maanta waxaan idinka sugeynay inaad noo soo gudbisaan warbixino ku saabsan codsigeena ku saabnsanaa miisaaniyad yarida ee aan ku socodsiin lanahay howlaha Guddiga loo idmey,
su’aasha kale ee ahaa Gobolada dalka sidee ayaa ku gaari kartaan?, Gobolada dalka idinka ayaan idinka rabnaa inaad nagu garab istaagtaan oo aad na hor kacdaan, laakiin waxaan idiin sheegeynaa in dalkaan Doorasho laga qaban karo waa hadii aad idinka daacad ka tihiin.”
Xildhibaan kamid ah Golaha oo talo iyo Arragtidiisa u soo jeediyey Guddiga ayaa yiri “waxaan bogaadinayaa habka ay u shaqeynayaan Guddiga, waxaan ku dhiirageligelinayaa inay dadaalkooda sii xoojiyaan,waxaan kaloo u soo jeedinayaa Guddiga Madaxabannan in ay cilmi baaris dheer ka sameeyaan habka doorasho oo ay dadkeenu qaadan karo, sidoo kale wuxuu Xildhibaanka ka hadley sababihii dhaliyey in la qaato doorasho dadban oo ka timid diidmada Doorasho Qof iyo Cod. mudo 18 bilood ku dhawaadna ay qaadatey in lawada ogolaado qaadashada doorasho dadban.
Waxaa kaluu uu Xildhibaanku soo jeediyey qodobada kala ah.
in la gaaro rabitaan heshiis siyaasadeed ee Somaliya iyo Somaliland
In is doorasho ku salaysan hab qabiil ay tahay in laga gudbo heerkasta oo kamid ah qaab dhismeedka dawladeena lagana bilaabo dawlad goboleedyada dalka ka jira in ay isku doortaan doorasho qof iyo cod ah tasoo tijaabo wanaagsan u ah mid heer qaran.
In la sameeyo tirikoob ee aan laga dhigin mid qasab ah maadaama ay tahay mid dhib badan,isagoo tusaale u soo qaatey dalal badan oo samayn tirakoob doorashooyin qof iyo cod ahna ay ka dhacaan.
Wuxuuna ugu dambeyn Xildhibaanku ka codsadey xildhibaanada in Guddiga lagu taageero Miisaaniyad ku filan oo ey ku fulinkaraan howlaha culus ee horyaala.
Khadiijo Cosoble oo ah Xubin ka mid ah Guddiga ayaa ugu mahadcelisey Xildhibaanada aragtida iyo soo jeedinta u soo jeediyey Guddiga MadaxaBannan ee Doorashooyinka Qaranka, waxayna cod adag ku tiri.”Doorasho waa dhacaysaa, qorshaha nooguma jirto in aan ku jahwareerno ma dhacaysaa doorasho iyo ma dhacayso, waxaan codsan lahaa in aad ka gudubtaan niyad xumidaas”.
Su’aalo ku saabsanaa arrimaha tirakoobka oo ay xildhibanada weydiiyeen
Guddiga ayaa ku jawaabay in Tirakoobku muhiim ayuu u yahay dalka hadii la fuliyo tirakoobkana wuxuu kaalin ka qaadanaya qorsheynta iyo fudeynta hawlaha doorashada balse Guddigu wuxuu aamisanyahay in muhiim ay tahay in la sameeyo diiwangalinta codbixiyeyaasha tasoo muhiim u ah hanaanka doorashada iyo kalsoonida lagu qabi karo natiijada kasoo baxaysa.
Ariimaha Xisbiyada iyo waxa laga qabtay ayaa kamid ahaa su’aalaha xildhibaanadu soo jeediyeen
Guddiga oo ka jawaabaya su’aalahas ayaa u dhiga sida:
“Waxaan aasaasney xafiis u qaabilsan diiwaangelinta xisbiyada ee aan u wakiilaney xildhibaan hore Maxamed Cumar oo aad wada garaneesaan, furitaanka xafiiska diiwangaliyahana xildhibaano badan oo idinka mid ah ayaa goob joog ka ahaayeen.
Sidoo kale xildhibaanada ayaa ka dooday caqabadaha Guddiga ku gudban ee uu la wadaagay Golaha waxayna sheegeen in wax walboo ku qoran dastuurka loo baahan yahay in lagu dhaqmo,
Guddoonka Golaha shacabka ayaa ku waragaliyay Guddiga Maaliyada ee Golaha shacabka in ay xil gaar ah iska saaraan miisaaniyadda Guddiga soo Gudbiyay islamarkaan ku dabagalaan xukuumadda.
Ugu dambeyn Gudoomiyaha kuxigeenka Golaha shacab ka oo shir guddoominayay kulanka ayaa u sheegay xildhibaanada iyo Guddiga in arrinta doorashada ay tahay arin qaran oo ay tahay in Golohu si qoto dheer uga doodo. Guddiga aya sidoo lagu wargaliyay in ay diyaar u ahaadaan in ay qayb ka noqdaan doodahas oo Golohu u yeeri doono Guddiga si wax looga waydiiyo arrimaha doorashada madaama ay yihiin hay’adda dastuuriga ah ee u xilsaaran arrimaha doorashada.
Waxaa la faafiyey September 4, 2017